inguqulelo 0.7.3 – Shortcodes support
EyoKwindla 25, 2011 ngokuthi umnikelo 55 izimvo
ifayilishwe Phantsi: Imiyalezo Jikelele ephawulweyo Nge: 0.7, engephi, khulula, shortcodes, yokuzonwabisa, Java Wordpress
inguqulelo 0.7.0 – Ikamva translation interface!
I enkulu Uguqulelo release elandelayo Transposh elapha, ukuba kubhiyozelwe sihlandlo siye udale ividiyo emfutshane (ngayo 11 imizuzu) . Ukwazisa iimpawu ezintsha efumaneka version entsha. Wena ngaphezu bamkelwa ukuze ubukele ividiyo nokutyumba ukuba ibhaso Academy Award elandelayo movie ukubuyekeza translation plugin.
Into yokuqala uzakuqhaphela kwi nguqulelo yamsebenzi intsha update ezinkulu kujongano yomsebenzisi, yokuba ambalwa iimpawu kakhulu ukuba nojongano ezifana amaqhiosha ecaleni / esidlulileyo, ukuvunywa iinguqulelo automated nokufumana amagama ziguqulelwa. Enye inkalo umdla sidibanise kukwazi ukuba umguquleli ukubona ibinzana lokuqala ngolwimi eyahlukileyo ukuba sele yaguqulelwa kwi ulwimi wathi ngesandla, ukuze ngokucinga unayo blog lesiHebhere leyo kwisi IsiNgesi, umguquleli angakwazi ukuba aguqulele isayithi yakho IsiNgesi kolunye ulwimi, leyo ibe kunokuba lula kuye. Ndifuna ukubulela Akebhore kuba ekuqaleni becela ukuba lo msebenzi. Kuyenzeka ngoku ukususa iinguqulelo zembali yencoko yababini, leyo linyathelo eliya kwicala esebenza ngayo ulawulo olungqongqo kubulunga translation.
Esibonakalayo kwakhona sleeker, nge ui amcele ukuba nalo localizable kwaye themable, uyakwazi ukucwangcisa umxholo yezicwangciso widget, indawo elungileyo ukuze siyinqobe ukuba iza kukhangeleka njani na themeroller. Ukuba ufuna ukunceda kuthi iguqulela elilujongano ngolwimi lwakho ukufumana credits ngokuba, nceda usazise ngokusebenzisa qha ukhetho nathi ngaphezu.
Omakhwapheni uhlanga nangoku, kunye Transposh nguye plugin lokuqala (esikwaziyo) ukuxhasa (ezingawuxhasiyo, inkxaso ukusebenza) kuba 60 iilwimi ngokudibanisa Esperanto inkxaso usebenzisa Apertium injini, kuba ngoku isebenza kuphela IsiNgesi blogs Spanish, kodwa ndiya kongeza ngeelwimi ezingaphezu phezu imfuno.
Baninzi fixed ngaphezulu zibandakanyiwe, ugqibo lwesiseko sedata, elide esidingekayo emva meta keys translation, kunye nokuninzi – lokuvala ~ 15 Amatikiti kwi zethu nghi.
Eyokugqibela kodwa engancinananga – credits ukuba abaguquleli kolu khutsho aye: Amir ukuba inguqulelo yakhe zesiHebhere Ignacio ngokuba translation Spanish, enkosi guys!